Miseho amin'ny sarontava | ny sarin'ny hosodoko iray an'ny Banksy Famoronana an-tserasera
I Banksy ve no nametaka sarontava tamin'ny rindrina hosodoko iray?
Iray amin'ireo Ny sary hosodoko fantatry ny Banksy izay nalaza indrindra dia nipoitra tampoka niaraka tamin'ny sarontava tarehy manarona ny endrik'ilay "Girl with a Pierced Eardrum." Raha izany tsy nisy resaka intsony dia toa nahagaga ny mpandalo izay sendra nandalo ny arabe naka sary vitsivitsy tamin'io fotoana io.
Efa avy amin'ny kaonty Twitter avy amin'ny iray amin'ireo mpandeha an-tongotra izay ahitantsika ireo sary nalaina ary mahafantatra tsara an'io sarontava io. Rindrambaina hita eo amin'ny Albion Walls ao amin'ny Hanover Place. Coronavirus afaka manova ny rindrina sasany amin'ity artista ity ary tsy fantatsika raha tena nitovy izy; indrindra taorian'ny nahitany ny fandroana fandroana andro lasa izay.
Ny tsy mazava, ary ao anatin'ny mistery, dia izay tsy fantatra raha Banksy tenany io. Fantatsika fa tamin'ny Instagram nataony tamin'ny herinandro lasa teo dia nasehony anay ny fomba niasany tao an-trano, ka azo antoka ny fahefany. Raha tsy hoe ny tsy ampoizina na hafetsen'ny majika hafa efa nahazatra antsika tamin'izay taona maro lasa izay; andao hotadidintsika izay nitranga tamin'ny lavanty.
Haingo vaovao ho an'ny zazavavy Banksy miaraka amina kavina perla ao Bristol pic.twitter.com/tuDQhiOU03
- Anthony Ward (@ Anth0ny_Ward) Aprily 22, 2020
Ny "Zazavavy misy sofina mandoko", Ary izay niseho tamin'ny 2014, dia tononkalo" Young with a pearl "nataon'i Johannes Vermeer. Ny zavatra mampiahiahy amin'ity fihetsika misaron-tava ity, hoy ny sasany, dia hoe raha tsy nanao izany i Banksy dia mampihena ny asany izany, ka dia hiandry izay zava-nitranga isika. Ho hitantsika raha manana zavatra holazaina i Banksy na hangina toa ny zava-nitranga talohan'ireny fisehoan-javatra ireny.
Tsy sambany koa ny asan'i Banksy "Nosimbanina" nataon'ny sasany izy io, ka miatrika ireo fahafaha-manao rehetra ireo isika. Sarontava izay manarona ny iray amin'ireo sanganasan'i Banksy amin'izao andron'ny coronavirus izao; lazao amin'i wally...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » I Banksy ve no nametaka sarontava tamin'ny rindrina hosodoko iray?
Ahoana ny fomba fiasa amin'ny artboards ao amin'ny Illustrator
Azonao atao izao ny misintona maimaimpoana ny magazine Asterix ary inona no manome ny virus tsara ho an'i Obélix